यो हो रेल भन्दा छिटो दौडिने घोडा,मूल्य कति पर्ला ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/यो हो रेल भन्दा छिटो दौडिने घोडा,मूल्य कति पर्ला ??
काठमाडौँ । एउटा घोडाको मूल्य कति पर्ला ? लाखको गणनामा घोडा आउने त हामीले सुनेका छौ । तर एउटै घोडाको मूल्य १६ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ । हो भारतमा एउटै घोडाको मूल्य १६ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यो घोडालाई पर्ने पैसाले दुईवटा बेन्टले कार नै आउँछ । यो घोडा यती प्रसिद्ध छ कि मानिस हेर्नकै लागि भएपनि कैयौँ किलोमीटरदेखि धाएरै आउने गर्छन् । यो घोडालाई महाराष्ट्रको सारंगखेडामा चलिरहेको घोडा उत्सवमा ल्याइएको हो । यो घोडाको नाम हो शान ।
यसका मालिक तारा सिंहका अनुसार शान मारवाडी नस्लको घोडा हो । तारा सिंह पंजावको अमृतरमा बस्दै आएका छन् । यो घोडा ८० किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा दौडन्छ । उनका अनुसार यो घोडा एक एस्पे्रस रेलको गतिमा दौडन सक्षम छ ।
कुन बार जन्मने मानिस कस्ता ? यस्ताे भन्छ ज्योतिषी शास्त्र
सात दिनमा सात बार पर्दछन् र हरेक बारकाे कारक ग्रह अलग अलग हुन्छन् । आइतबारको कारक ग्रह सूर्य हो भने सोमबारको चन्द्र, मंगलबारकाे मंगल, बुधबारको बुध, बिहीबारको वृहस्पति, शुक्रबारको शुक्र र शनिबारको कारक ग्रह शनि हो । ज्योतिषी शास्त्रका अनुसार व्यक्तिको जन्म जुन बार हुन्छ, त्यस बारको कारक ग्रहको प्रभाव सम्बन्धित व्यक्तिको स्वभाव र भविष्यमा पर्दछ । कुन कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जन्मबारका आधारमा पत्ता लगाउन सकिने ज्याेतिषीय मत रहेकाे छ ।